बारा जीतपुरमा काँग्रेस,एमाले र माओवादी बाहेकका पार्टीलार्इ शुन्य मत ! - Everest Dainik - News from Nepal
बारा जीतपुरमा काँग्रेस,एमाले र माओवादी बाहेकका पार्टीलार्इ शुन्य मत !
बारा, असोज ४ । बाराको जीतपुर सीमरामा उपमहानगरपालिकामा पहिलो ३०० मत गन्दा ३ पार्टीको मात्रै मत आएको कार्यकारी अधिकृत होमप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले समान एक/एक सय मत प्राप्त गरेका छन् । यही मत उपप्रमुखमा पनि एक/एक सय मत आएको छ ।
त्यस्तै, तेस्रो हुने पार्टी माओवादीले ९६ मत प्राप्त गरेको छ। उसको पनि उपप्रमुखमा सोही संख्यामा मत आएको उनले जानकारी दिए । बाँकी रहेको ४ मत भने बदर भएको छ ।
यो सँगै पहिलो ३ सय मत गन्दा अन्य सबै पार्टीहरुको मत शुन्य आएको उनले जानकारी दिए ।
याे पनि पढ्नुस चारवटै महानगरपालिकाकाे पछिल्लो परिणाम